Dagaalo ciidamada Woyanaha lagu Wiiqay oo Ogadenia kadhacay. | ogaden24
Dagaalo ciidamada Woyanaha lagu Wiiqay oo Ogadenia kadhacay.
Wararka naga soo gaadhaya Gobolada Nogob iyo Faafan ee wadanka Ogadenia ayaa sheegaya lagaalo cul culus oo Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenia iyo Kuwa Wayaanaha ku dhexmaray Goboladaas.
Warkan oo aan kahelay xarunta dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia ayaa faah faahin kabixinaya dagaaladan oo ahaa howl galo ay ciidanka xooga dalka Ogadenia qaadeen todobaadnan.
Sida xogta aan kuhelay dagaalada ayaa yimid kadib markay naftood hurayaasha udagaalama xornimada Ogadenia ka war heleen ciidamada wayaanaha oo falal shacabka kadhan ah kawada deegaano Gobolada Nogob iyo Faafan kamid ah waxayna dagaaladu udhaceen sidan.
14/1/17 Booraalle oo Dagmada Baabili ee Gobolka Faafan katirsan dagaal culus oo ciidanka JWXO iyo kuwa wayaanaha ku dhexmaray waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay inta hubo 10 askari 15 kalana waa lagaga dhaawacay waxaana ciidanka JWXO usuura gashay in ay gacanta kudhigaan hub iyo saanad ciidan oo kale.
17/1/17 Daawadiid oo Dagmada Dhuxun ee Gobolka Nogob katirsan dagaal culus oo ciidanka xooga dalka Ogadenia iyo kuwa saama laluudka ah ee gumaysiga ku dhexmaray waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 8 askari 13 kalana waa lagaga dhaawacay.